COVID-19 | baophiladelphia
कोरोना (COVID-19) पोजेटिभ भयो - अब के गर्ने?
अमेरिकामा नेपालीको जनसंख्या कमै भएपनि एक लाख भन्दा माथी मानिसहरुलाई यो रोग लाग्दा हाम्रो समुदाय अछुत रहन सकेन। हाम्रो समाजमा भर्खरै प्राप्त सूचना अनुसार उलेख्य संख्यामा यो रोग को परिक्ष्यण positive आएको खबर छ। हाम्रो सामाजिक घेरा एति सानो छ कि अब यसले हाम्रो समाज भित्रै बिकराल रुप लिन सक्छ। त्यसैले यसको रोकथाम अनि यो रोग लागिहाल्यो भने के गर्ने भन्ने जानकारी CDC (Center for Disease Control) को पेज बाट साभार गरेर प्रस्तुत गरेको छु।
कस्ता मानिस हरु जोखिममा छन् ?
६५ बर्ष भन्दा माथि उमेर भएका
नर्सिङ्ग होममा बस्ने मानिसहरु
फोक्सो सम्बन्धी दिर्घरोग जस्तै दमको रोगी
मुटु सम्बन्धी गम्भीर रोग भएका मानिसहरु
सरिरको प्रतिरक्ष्या प्रणाली कम्जोर भएका- जस्तै क्यान्सर रोगी
मोटोपन भएका कुनैउमेर समुहका मानिस र चिनी रोग (Diabetes), मृगौला फेल भएका (Kidney failure), कलेजो रोग या फेल (Liver disease or Liver failure)
कोरोना का पहिला लक्ष्यणहरु :
सास फेर्न गारो हुने
याद गर्नुहोस् यी लक्ष्यणहरु COVID-19 भाइरस तपाईंको शरीरमा प्रवेश गरेको २ - ४ दिन पछि मात्र देखा पर्छन। यदि यी लक्ष्यण हरु तपाईमा देखापरे भने तुरुन्त तपाईंको डाक्टरलाई फोन गर्नुहोस। तपाईको डाक्टरले तपाईंको टेस्ट गर्नु पर्ने या नपर्ने सल्लाह दिन्छन। लक्ष्यण देखा परेको दिन भन्दा ३ दिन अगाडी देखि तपाईं को सम्पर्कमा आएका सबै मानिसहरु लाई सचेत गर्नुहोस। हुन् त यो जानकारी तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो, तर तपाईंलाई सजिलो लाग्छ र अरु मानिसलाई यसबाट बच्न सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सामाजिक संस्थाका व्यक्तित्व हरुसंग सल्लाह गरेर यो जानकारी सार्बजनिक गर्न सक्नुहुन्छ - यसो गर्दा अरु मानिसहरु सतर्क रहन अनि रोग फैलिन बाट रोक्न सकिन्छ।
कोरोना का आपतकालीन (Emergency) लक्ष्यणहरु :
सास फेर्न एकदमै सारो पर्नु
छाती दुखि रहनु या छातीमा गरुङ्ग चिजले थिचेजस्तो हुनु
मानसिक अवस्था मा परिवर्तन आउनु (भ्रमित हुनु या लाटिनु )
ओठ या अनुहारको रंग निलो हुनु
यी लक्ष्यण हरु आपतकालीन लक्ष्यण हुन्, तपाईले यति खेर आफ्नो डाक्टर लाई तुरुन्त फोन गर्नु पर्छ, येदि डाक्टर संग सम्पर्क हुन् सकेन भने ९११ (911) कल गर्नु पर्छ अनि तुरुन्त अस्पताल जानु पर्छ। ९११ कल गर्दा उनि हरुलाई तपाईको लक्ष्यणका बारेमा भन्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ, यसो गर्दा उनीहरुलाई तयार भएर आउन सहयोग पुग्छ। रोग लगेरपनि कमै मानिसहरुमा जटिलता भएर अस्पताल भर्ना हुनु पर्ने या एक देखि दुई प्रतिशत मानिसहरुको मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाएको छ। त्यसैले नआतिनुहुस, साबधानी र सतर्कता आपनाउनु भयो भने यो रोग लाग्दा साधारण रुगा लागे जस्तो मात्र हुन्छ र आफै निकोपनि हुन् सक्छ। याद गर्नुहोस्, अहिले सम्म यो रोग निको हुने औषधि बनिएको छैन।
टेस्ट पोजेटिभ आयो - अब के गर्ने?
नअतिनुहोस - कुनैपनि बेला आफ्नो डाक्टर या ९११ कल गर्न तयार हुनुहोस्। घरमा यी कुराहरु गर्नुहोस।
बिरामीको आफ्नो छुट्टै कोठा बनाउनु होस् (Isolation Room)
घरमा प्रयोग हुने सामान आफु मात्र प्रयोग गर्नुहोस - सम्भब भए बिरामीले प्रयोग गर्ने टोइलेट अरुले प्रयोग नगर्नुहोस।
अरु मानिस संग कम्तिमा ६ फिटको दुरी राख्नुहोस।
आराम गर्नुहोस् , स्वस्थ्य खाना खानुहोस् , प्रसस्त मात्रामा पानी पिउनुहोस्।
साबुन पानीले २० सेकेन्ड सम्म हात धुनुहोस्। ६० प्रतिशत भन्दा माथि अल्कोहलको मात्रा भएको कुनैपनि घर सफा गर्ने पदार्थले बारम्बार आफु ले प्रयोग गर्ने फर्निचर या सामान हरु सफा गर्नुहोस।
खोक्दा या हाक्ष्यु गर्दा टिस्यु पेपर मा गर्नुहोस र सुरक्षित ठाउँमा फ़ल्नुहोस।
तपाईंमा कुनैपनि जोखिम छैन भने तपाईंको शरीरले आफै यो रोग संग लडेर विजय प्राप्त गर्नपनि सक्छ।
मास्क लगाउनुहोस - यसो गर्दा रोग अरुलाई सर्न बाट जोगिन्छ।
आपतकालीन अवस्थामा अस्पताल जान भन्दा अरु कुनैपनि कारण घरबाट बाहिर नजानुहोस।
आफ्ना साथीहरु र आफन्त संग प्रत्यक्ष्य भेट् नगरेपनि फोन मार्फत कुरा गर्नुहोस।
कहिले सम्म यी सतर्कता अपनाउनु पर्छ ?
तपाईं फेरी टेस्ट गराउनु हुन् भने -
कुनैपनि ज्वरोको औषधी नखाई ७२ घण्टा (३ दिन) ज्वरो नआउन्जेल सम्म अनि
तपाईंका अरु लक्ष्यण हरु - खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने, जाति नभए सम्म अनि
पहिलो लक्ष्यण देखापरोको सात दिन सम्म
तपाईं फेरी टेस्ट गराउनुहुन्छ भने :
पहिलो लक्ष्यण देखापरोको सात दिन सम्म अनि
२४ घण्टाको अन्तरालमा लगातार गरिएका २ वटा टेस्ट नेगेटिभ नहुन्जेल सम्म।
हुन त यी जानकारीहरु CDC को अधिकारिक वेबसाईटबाट साभार गरिएपनि यो पूर्ण रुपले तपाइको लागि पूर्ण स्वास्थ सुझाब होइन। पूर्ण स्वास्थ सल्लाह / सुझाबको लागि आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यो संकटको घडीमा आफुसुरक्षित रहनुहोस् र अरुलाई सुरक्षित रहन सहयोग गर्नुहोस।
Shekhar Bastola, RN, BSN